မိမိပတ်ဝန်းကျင် « MMWeather Information BLOG
ကမ္ဘာကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုတွေ့ရှိ
By heronaing, on November 5th, 2011%
လာမည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ကြီးမားလှသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုမှာလ၏ အကွာအဝေးထက်ပင် ပိုမိုနီးကပ်သည့် အကွာအဝေးဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအနီးမှ ဖြတ်သန်း သွားနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များမှ ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပြီး ၎င်းတို့ အနေဖြင့် စုံစမ်းရေး အာကာသယာဉ်ကဲ့သို့ အကုန်အကျ များသည့် ယာဉ်များ တည်ဆောက်စရာ မလိုဘဲ စူးစမ်း လေ့လာမှု ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများ မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
2005 YU 55 ဟုအမည် ပေးထားသည့် အဆိုပါ ဂြိုဟ်သိမ်မှာ လာမည့် အပတ် ကြာသပတေးနေ့ ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် ၂၃ နာရီ ၂၈ . . . → Read More: ကမ္ဘာကြီးနှင့် နီးကပ်စွာ ဖြတ်သွားနိုင်သည့် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်သိမ် တစ်ခုတွေ့ရှိ
One comment အာကာသဆိုင်ရာသတင်းများ တောင်တွင်းကြီးမြို့အနီးမှ တောင်များနိမ့်ဆင်းခြင်းနှင့် မြေပြင်မြင့်တက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များ
Leaveacomment မိမိပတ်ဝန်းကျင်, ဆောင်းပါး ဆောင်းပါး, မြေပြင်ပြောင်းလဲမှု မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပန်းကန်ပြားပျံတွေ့ရှိ။
By heronaing, on December 16th, 2010%
ပန်းကန်ပြားပျံ ပျံသန်းလာမှုအားစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် သတ္တမတန်းကျောင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်သော မောင်ဇော်မျိုးလွင်နှင့် မောင်ခိုင်ဇော်လင်းပြောပြချက်။
အဆိုပါယာဉ်ပျံ ပျံသန်းလာစဉ် အတွင်း စက်သံမကြားရသည့်အပြင် မီးသတ်စခန်းမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် လည်း ရုပ်ပုံမပေါ်ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာန မှရရှိသော သတင်းများအရ . . . → Read More: မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပန်းကန်ပြားပျံတွေ့ရှိ။
4 comments UFO UFO ဖိလစ်ပိုင်မှ သူကြီးပြန်ကြားစာ
6 comments မိမိပတ်ဝန်းကျင်, ပြန်ကြားစာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်, ပြန်ကြားစာများ Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum